Eyebrow တစ်စုံရဲ့ ညီညာမှုဟာ အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Eyebrow တစ်စုံရဲ့ ညီညာမှုဟာ အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်!
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အလှပြင်တဲ့အခါ တခြားအရာတွေ ဘယ်လောက်လှအောင်ပြင်ထားပါစေ မျက်ခုံးဆွဲထားတာ ညီညာခြင်းမရှိ လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် လှပမှုကို အပေါ်လွင်တဲ့အပြင် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ထိပါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ အရောင်ပါ။ မျက်ခုံးအရောင်ဟာ မိမိဆံပင်အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်း မြင်ရသူအဖို့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်တော့ Maybelline ရဲ့ EYESTUDIO BROW DEFINE + FILL DUO လေးရှိပါတယ်။
ဒီ Eyebrow လေးကတော့ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာခြယ်သနိုင်ပြီး သဘာဝမျက်ခုံးလေးအတိုင်း ဖြစ်စေတာမို့လို့ လူကြိုက်အရမ်းများလာတဲ့ ပစ္စည်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စဆွဲခါစသူတွေအနေနဲ့လည်း အခက်ခဲမရှိ လွယ်ကူစွာ ဆွဲနိုင်ဖျက်နိုင်တာမို့ သုံးလို့အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Eyebrow shape အတွက်ရော Filling powder အတွက်ပါ ၂မျိုးလုံးပါဝင်တာကြောင့် အကုန်အကျလည်း သက်သာစေနိုင်တဲ့အပြင် ထိန်းသိမ်းရတာလည်း လွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ကတော့ ၄မျိုး ထွက်ရှိထားပါတယ်။ မိမိဆံပင်အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ အရောင်ကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးရန်သာလိုအပ်ပါတယ်။ အညိုရောင်ကို အနုကနေ အရင့်ထိ ရွေးချယ်စရာရှိလို့ အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်စေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာ အသေချာပါဘဲနော်။
သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မျက်ခုံးဒီဇိုင်းကို အရင်ဆုံးပုံဖော်ပေးရပါမယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းရပြီဆိုရင်တော့ အလယ်ကလိုအပ်နေတဲ့ အပိုင်းကို လိုသလိုဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။ ကဲ ဒါဆို မိမိလိုချင်တဲ့ Eyebrow လေးဒီဇိုင်းလေးကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံး ဆွဲနိုင်ရန်အပြည့်အဝကူညီပေးနိုင်သော ပစ္စည်းလေးကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုပြီး လှနိုင်ကြပါစေနော်။
Gloss Lipstick ကောင်းကောင်းကိုမှ ဆိုးချင်တယ်ဆိုရင်